ချင်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ-USA မှ CDM လှုပ်ရှားမှုအတွက် ကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းလှူဒါန်း – Khonumthung Media Group
You are at:Home»Khonumthung»ချင်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ-USA မှ CDM လှုပ်ရှားမှုအတွက် ကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းလှူဒါန်း
ချင်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ-USA မှ CDM လှုပ်ရှားမှုအတွက် ကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းလှူဒါန်း
By Editor on	 February 18, 2021 Khonumthung
Benezer – အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အခြေစိုက်သည့် ချင်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ (CBC-USA) အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် CDM လှုပ်ရှားမှုတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသော အစိုးရဝန်ထမ်းများ ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သိန်းတိတိအား ပထမအကြိမ်အနေဖြင့် ပေးပို့လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
CBC-USA ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin က စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် CDM တွင် ပါဝင်ပေးကြရန်နှင့် ဘုရားသခင်သည် မိမိတို့ဘက်တွင် ရပ်တည်ပေးနေကြောင်း ၎င်း၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေးသားထားသည်။
ထို့ပြင် CBC-USA အနေဖြင့် GoFundMe website မှတဆင့် အွန်လိုင်းရံပုံငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး လက်ရှိတွင် ဒေါ်လာ နှစ်သောင်းနီးပါးရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလက်ရှိ CDM လှုပ်ရှားမှုတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသော ဝန်ထမ်းများသည် ရုံးပြန်တက်ရန် ဖိအားပေးခြမ်းခြောက်မှုများ လည်း ရင်ဆိုင်လျှက်ရှိကြသည်။
Benezer – အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား (CBC-USA) အဖြဲ႕မွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန႔္က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ CDM လႈပ္ရွားမႈတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သိန္းတိတိအား ပထမအႀကိမ္အေနျဖင့္ ေပးပို႔လႉဒါန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
CBC-USA ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ Rev. Dr. Thlaawr Bawihrin က စည္းစည္းလုံးလုံးျဖင့္ CDM တြင္ ပါဝင္ေပးၾကရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိတို႔ဘက္တြင္ ရပ္တည္ေပးေနေၾကာင္း ၎၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားထားသည္။
ထို႔ျပင္ CBC-USA အေနျဖင့္ GoFundMe website မွတဆင့္ အြန္လိုင္းရံပံုေငြရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုလက္ရွိ CDM လႈပ္ရွားမႈတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ရံုးျပန္တက္ရန္ ဖိအားေပးျခမ္းေျခာက္မႈမ်ား လည္း ရင္ဆိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္။